Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Oo Kulan laqaatay Madaxweynaha Ruushka.
Thursday April 25, 2019 - 11:21:33 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kulankii ugu horreeyay ayay yeesheen Hoggaamiyaha dowladda Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweynaha Ruushka oo labaduba ka biya diiddan siyaasadda Mareykanka.
Vladimir Putin iyo Kim Jong-un ayaa kulankoodii ugu horreeyay ku yeeshay magaalada Vladivostok ee wadanka Ruushka, labada mas'uul oo shir Jaraa'id wada qabtay ayaa sheegay in kulankooda ay diiradda ku saarayaan xiriirka labada wadan iyo arrimaha dhaqaalaha.
Putin wuxuu sheegay in uu ku faraxsanyahay lakulanka Kim Jong-un uuna ka gacansiin doono arrimaha Nabad gelyada Jaziiradda Kuuriya iyo kobcinta dhaqaalaha dowladda Kuuriyada Waqooyi, "waxaan hubaa in booqashadaada maanta ee Ruushka ay gacan ka geysanayso sidii loo xallin lahaa mushkiladda ka jirta Jaziirad u ekaha Kuuriya" ayuu yiri Vladimir Putin.
Dowladda Ruushka waxay sheegaysaa in ay hoggaanka xukuumadda Pyongyang ay ku cadaadin doonto sidii dib loogusoo celin lahaa cilaaqaadkii ka dhaxeeyay Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo 50-kii sanadood ee lasoo dhaafay ahaa mid go'an.
Kim Jong-un ayaa horay laba jeer kulamo ula qaatay Donald Trump Hoggaamiyaha Cunsuriga dowladda Mareykanka balse kulamadaas wax natiija ah kamasoo bixin oo Kuuriyada waqooyi wali lagama qaadin cunaqabateymihii dhanka dhaqaalaha ahaa ee saarnaa.
Madaxweynaha Mareykanka iyo kaaliyaashiisa oo Isbitaal ladhigay.